Shiinaha warshad wax soo saarkiisa iyo alaab-qeybiye | GOODTONE
Naqshadeynta Biophilic waa jihadayada qaabeynta kursi. Waxaa laga soo qaatay balanbaalista, waxay bixisaa xiriirka aan tooska ahayn ee u dhexeeya aadanaha iyo dabeecadda, iyadoo abuureysa dhiirrigelin kama dambaysta ah.
Xulashada adag ee 'GOODTONE' waa talaabada ugu horeysa ee kaliya ee lagu abuurayo sheyga ugu sareeya ee khibrada xafiiska casriga ah, si loo sameeyo agabyo kala duwan oo kuxiran kooxda naqshadeynta oo qumman oo leh taajir taajir ah, farshaxan heer sare ah laga bilaabo naqshadeynta ilaa hirgelinta shaqada wax ku oolka ah ee sublimation. kooxaha tayada lihi waxay leeyihiin dib u eegis ku saabsan hagida iyo xakamaynta geeddi-socod kasta, oo waligood ha ka sii daynin cilladaha yaryar. Shey kastaa ha muujiyo natiijo guud oo wanaagsan.
Martin Ballendat wuxuu caan ku yahay qaab fudud, xarrago iyo qaab naqshad casri ah, eray bixintiisa adag wuxuu ku guuleystay abaalmarinno badan oo naqshadeyn ah. Martin Ballendat, wuxuu ku dhashay Bochum, Jarmalka 1958, wuxuu shahaado ka qaatay Naqshadeynta Warshadaha Dugsiga Farshaxanka ee Folkwang (Jaamacadda Essen). Qalin jabinta ka dib, wuxuu qabtay jagooyin badan oo muhiim ah oo ku saabsan qalabka guryaha. Sannadkii 1995, wuxuu aasaasay istuudiyadiisa shaqsiyeed Design Ballendant, isagoo hoggaaminaya koox naqshadeysan oo tayo leh, oo isku daraya tikniyoolajiyadda, waxqabadka iyo farshaxanka qaab fudud.
Waxaa loo dhisay Jiilka Z
Marka la eego muuqaalka, waxay jabisaa silsiladaha qaababka dhaqanka waxayna adeegsataa fikrad naqshad cusub si kor loogu qaado aqoonsiga iyo moodada kuraasta xafiisyada, iyadoo la abuurayo xafiis xafiis oo da ’yar si loo daboolo baahiyaha jiilka cusub ee dadka goobta shaqada.
Mesh neefsasho u eg filim
Isticmaal qalab tayo sare leh oo deegaanka u fiican, anti-ilmo-karti sare leh, u adkeysata xirashada, wasakhda u adkaysata oo ay fududahay in la nadiifiyo.
Madax-qaadista furi kara
Faaligga isku-hagaajinta ee afartan sentimitir wuxuu hagaajin karaa dhererka madaxa marka loo eego dadka dhererka kala duwan, waxay gacan ka geysan kartaa taageeridda miisaanka madaxa, iyo nasashada maskaxda waqti kasta oo jimicsi muddo dheer ah.
Naqshadeynta dhexda Bionic
Taageerada lumbar ee qaab-qeyb-xiran ee balanbaalis-u-dhow ee ku dhow cirifka laf-dhabarka waxay si wax ku ool ah uga yareysaa cadaadiska muruqyada dhexda, waxay saxdaa booska fadhiga oo liita waxayna hagaajisaa muuqaalka shaqsiyeed.
Janjeer saddex-heer ah